Termografia momba ny typography: Apex mba hilomano ary ny Gadzook eo anelanelany | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 21, 2015 Alahady Oktobra 25, 2015 Douglas Karr
Mahavariana ahy ny typography. Ny talenta an'ny mpamorona mba hampivelatra endritsoratra izay miavaka ary afaka maneho fihetseham-po mihitsy aza dia tsy mampino. Fa inona no mahaforona taratasy? Diane Kelly Nuguid atambatra ny infographic voalohany hanomezana fahafantarana ireo faritra samihafa amin'ny taratasy amin'ny typografia. Kitiho eo raha hijery fijery feno.
Gadzook - Ny ravaka mampifandray ireo litera roa amin'ny Ligature.
serif - Ny vinavina manitatra ny kapoka lehibe ataon'ny olona iray. Midika ara-bakiteny ny Sans serif hoe 'tsy misy' Serif. Ny endritsoratra miorina amin'ny serif dia fantatra fa manampy ny olona hamaky haingana satria ny endrik'ilay teny no voafaritra tsara kokoa.
Janie Kliever no nanome ny faharoa infographic for Canva miaraka amin'ny antsipiriany fanampiny. Tsindrio eo raha hitsidika ny lahatsoratr'izy ireo raha hijery hohonu ny tsirairay.